बागलुङकी सांसद पियारीलाई प्रदेश बैठकमा प्रहरीले किन रोक्यो ? |
बागलुङकी सांसद पियारीलाई प्रदेश बैठकमा प्रहरीले किन रोक्यो ?
बागलुङ— प्रदेश नं ४को बैठकमा खुरुखुरु भित्र छिर्न लागेका सांसदहरुलाई प्रहरीले फर्काउँदै लाइनमा उभ्यायो ।
सोमबार बिहान साढे १० बजेदेखि नै नदीपुरस्थित नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र पोखराको गेटमा प्रदेश सांसदहरु लाइनमा उभिएका थिए ।
गेटमा एक जना प्रहरी जवानलाई फाइलमा नाम, ठेगाना, पद, फोन नम्बर टिप्न भ्याईनभ्याई थियो । एकैजनाले फाइलमा सांसददेखि पार्टीका कार्यकर्ता, कर्मचारी र पत्रकारसम्मका नाम टिप्नुपर्दा अव्यवस्थित र अमर्या्दित देखिन्थ्यो । हिँडेर आएका सांसदको नाम टिप्दा गाडीमा आएका माननीयहरु गेटभित्र छिरेको पत्तै पाएनन् प्रहरीले । सांसदका लागि प्रदेशसभा हलको बाहिर छुट्टै हाजिरी किताब थियो । तर, प्रहरी र व्यवस्थापन पक्षबीच समन्वय नहुँदा सुरुमै अव्यवस्थित देखियो ।
संसद सचिवालयले परिचयपत्र उपलब्ध नगराइसकेको अवस्थामा परिचय खुल्ने कुनै कागजात वा निर्वाचन आयोगले दिएको निस्सा लिएर सांसदलाई बैठकमा आउन आग्रह गरिएको थियो । बागलुङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापालाई प्रहरीले गेटमा रोक्यो । थापालेआफू सांसद हुँ भने पनि प्रहरीले नपत्याएपछि नागरिकता देखाएरभित्र छिर्नुर्पयो । थापा बागलुङको सुखौराकी हुन् । जनमोर्चाकोतर्फबाट समानुपातिक सूचीमा परेकी थापा रक्तिमको सांस्कृतिक अभियानमा हिँड्दा हिँड्दै सांसद बन्ने अवसर पाएकी हुन् । सम्भबतः प्रदेश नम्बर ४की कान्छि सांसद रहेकी थापालाई सानै देखेर प्रहरीले नपत्याएको हुन सक्छ ।
नेपाल प्रहरीको उदाहरणीय काम,सडकमा वेवारिसे रात कटाइरहेका असहायको…
पहिरोले रोक्यो नारायणगढ–मुग्लिन सडक
महेन्द्रनगर तनावग्रस्त, कर्फ्यु आदेश जारी
प्रहरी भर्तीमा आएका युवक हत्या प्रकरण : भिडियो खिचेको र हत्या आरोपमा